International Adapter - ဖြတ်သန်းခဲ့သော ဘဝပုံရိပ်များ
Home ဒဿန International Adapter
Samuel Soe lwin 11:48:00 AM ဒဿန,
ကျွန်တော်ဘုရားအခွင့်ပေးလို့ အိမ်မက်သစ်မီဒီယာမှ အစီအစဉ်ဖြင့် မလေးရှားကို စာပေဟောပြောပွဲနှင့် ကျမ်းစာသင်တန်း အတွက်ဆိုပြီး စာရေးဆရာ မောင်နွယ်ဖြင့် (စာပေဗိမာန်ဆုရ)နှင့်အတူ ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်းသူငယ်ချင်းဆရာတစ်ဦးကသူဝယ်လာတဲ့အသစ်စစ်စစ်Samsungကလေးကို ရောင်းတာလဲမဟုတ်၊ ပေးတာလဲ မကျနှင့် မစခဲ့တော့ သူများ Touch တော့ ကိုယ် လည်းလိုက်ပြီးတော့ Touch ခဲ့ပါတယ်။
စျေးတော့အကြီးစားထဲမပါပေမယ် ကျွန်တော့်ဝါသနာပါတဲ့ ကျမ်းစာ၊ အနက်ဖွင့်ကျမ်း၊ အဘိဓါန်၊ နေ့စဉ်ခွန်အားနှင့် အခြားကျမ်းစာ မှတ်တမ်းလေးတွေပြုနိုင်တော့ အားကိုးအားထားဖြစ်တာပေါ့။ မလေးရှားကို ကောင်းမွန်စွာရောက်လာပါတယ်ဗျာ… ရောက်ရောက် ချင်းအခက်တွေ့ရတာက ကျွန်တော့် Samsung ကလေးက ပြဿနာရှာတော့တာပါပဲ။
ခက်ရော ၂၄ နာရီမီးရတဲ့ မလေးရှားမှာ ကျွန်တော့်ဖုန်းက အားမရှိတော့ဘူး၊ မြန်မာပြည်က Adapter ကသေးနေပြီး၊ မလေး Adapter တွေက အနည်းငယ်ကြီးနေတဲ့အတွက်ပါပဲ၊ တကယ်တော့ ကျွန်တော်လိုနေတာက အထူးတလယ်မဟုတ်၊ ဒါပေမယ့် သည်ကြားခံဖြစ်တဲ့ Adapetမရှိရင်တော့ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာကလည်းWifiကရနေပေမယ့်”ကျွန်တော့်အတွက်က မြင်သာမြင်မကြင် ရတဲ့အဖြစ်” ရင်နာစရာ ကောင်းတယ်လို့ပြောရ မလား။အကျပ်ရိုက်တယ်ဆိုမလား။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်”စိတ်တိုင်းမကျတာကသေချာနေ တယ်” “သူများတကာဖြစ်နေ၊ လုပ်နေလျှက်နဲ့ ကိုယ်ကမဖြစ်၊ မရ”ဆိုတော့ အတော်ကလေး ကသိကအောင့်နိုင်လွန်းပါတယ်။
ကျွန်တော့်မှာဘုရားပေးတဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်၊ မလေးမှာ မီး၊ မိတ်ဆွေထံမှာ Wifi ရှိနေပေမယ့် ဒါတွေအားလုံးကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့လိုနေတာက International Adapter လေးပါပဲ။
မြန်မာပြည်မှာတော့ တွေ့တဲ့ Plug ပေါက်ထဲမှာ အားဖြည့်လို့ရခဲ့ပေမယ့်၊ သည်မှာမရတဲ့အတွက် ပြဿနာကြုံရတာပါ။ ဒါနဲ့ Tesco မှာ စျေးဝင်ဝယ်လိုက် တယ်ဆိုရင်ပဲ ပြဿနာကစပြီး- Adapter ရချင်တယ်လို့ဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်စကားလယ်လယ်ဝယ်ဝယ်ကောင်တရုတ်မလေးတစ်ဦးထွက်လာတယ်။
နောက်တော့ Which type of Adapter? တဲ့
Phone Chargingအတွက်လို့ ပြောလိုက်တော့။
Are you from Myanmar? လို့မေးလာတယ်။
သည်တော့လည်း အားကျမခံ ရင်ကိုမော့၊ ခါးကိုမတ်ပြီး Why not? လို့ပြောလိုက်တယ်။
ဘုရားသခင်က ထားရှိတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူစွာနှင့် ရဲရဲပဲပြောလိုက်တယ်။
သည်တော့ တရုတ်အရောင်းစာရေးမလေးက-Please, waitaminute လို့ဆိုပြီးနောက် Let’s him get International Adapter ဟုကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုလှမ်း ပြော လိုက်တာကိုမြင်လိုက်တယ်။
လိုချင်တာရသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ အတွေးဝင်မိတာက “ဘုရားသခင် သားကိုယ်တော့်ရှေ့မှာ အင်တာနေရှင်နယ်မှီရဲ့ လားလို့” တွေးရင်းမေးခွန်းထုတ်လိုက်မိတယ်။
ကျွန်တော် ဘုရားထားရာ မြန်မာပြည်သား၊ ဗမာလူမျိုး၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်၊ ဘုရားသားအမှုဆောင်ဖြစ်ရခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူမိ တယ်။ ဒါပေမယ့် Are you from Myanmar ဆိုပြီးနောက်မှာ Let him get International Adapter ဆိုတဲ့့ စကားထဲက International ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကြားတော့ –
ကျွန်တော့်မှာ ဘုရားပေးထားတဲ့ စွမ်းရည်၊ အင်အား၊ ပညာ၊ အသိုင်းအဝိုင်းတွေအားလုံးရှိတယ်။ သို့ပေမယ့် ဘုရားအတွက်၊ သာသနာအတွက်၊ စာပေအတွက်၊ အမိမြန်မာပြည်ကြီးအတွက်၊ မိမိလူမျိုးများအတွက် International Adapter လေးပိုင်ဆိုင်ထားရဲ့လား၊ International Adapter ကောဖြစ်ရဲ့လားလို့ဆင်ခြင်လိုက်မိတယ်။
လက်ရှိအချိန်ကလေးမှာ ကျွန်တော် ကျေနပ်တဲ့အဖြေကလေး ကိုယ်တိုင် ပေးနိုင်ပေမယ့် တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ သာသနာအတွက်၊ ဘုရားအတွက် International Adapter လေးတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းနေသွားပါ့မယ်လို့ သန္နိဌာန်ချလိုက်မိပါတော့တယ်။
မှတ်ချက်။ International Adapter ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီ။
Tags # ဒဿန
by Samuel Soe lwin - 11:48:00 AM